रिल्याक्स गर्न चन्द्रागिरी पुगेका माधव नेपालको भोक निद्रा हरायो, यस्तो सूचना पाएपछि डरले काप्न थाले थरथर ! – List Khabar
Home / समाचार / रिल्याक्स गर्न चन्द्रागिरी पुगेका माधव नेपालको भोक निद्रा हरायो, यस्तो सूचना पाएपछि डरले काप्न थाले थरथर !
रिल्याक्स गर्न चन्द्रागिरी पुगेका माधव नेपालको भोक निद्रा हरायो, यस्तो सूचना पाएपछि डरले काप्न थाले थरथर !
admin August 25, 2021 समाचार Leaveacomment 64 Views
नेकपा एमालेबाट चोइटिएर गएका माधव कुमार नेपालमाथि अर्को ठूलो बज्रपात भएको छ । प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशबाट उचालिएर माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागी निवदेन दिए पनि उनले चाहे जती सजिलो सँग दल दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
माधव नेपालको टिमलाई निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि बोलाएको छ, ठिक त्यहि बेलामा नेकपा एमाललेको तेस्रो धार भन्ने नेताहरुले पार्टी एकताका लागि भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहमती गरेका छन् माधव नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो टेन्सन अहिले यसैमा देखिएको छ ।
आजै ११ बजे बस्ने एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले महत्वपुर्ण निर्णहरु गर्ने अनुमान गरिएको छ । एमाले एकताका लागी भन्दै बनाइएको कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमती गरेर जाने सहमती हुनासाथ मूलभूत रुपमा एमाले एक हुने डरले नेपाललाई सताएको छ ।
एमाले एक भएको सन्देश जाने वित्तिकै आफ्नो अडान कमजोर हुने र अन्तिममा निर्वाचन आयोगमा सनाखत गर्न जाने बेलामा पार्टी फुटाउन आवश्यक पर्ने २० प्रतिशत पनि संख्या आफुसँग हुने होकी होइन भन्ने डरले माधव नेपाल ठूलो तनावमा रहेको बुझिएको छ ।
नेपालले आफुलाई साथ दिएका केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई ‘सुरक्षित राख्न’ महँगो रिसोर्टमा पुर्‍याएका छन् । आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्य र सांसदसहित उनी सोमबार चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा बास बस्न गएका हुन् । नेपाल दिउँसो ३ बजेअगावै चन्द्रागिरि पुगेका थिए । यि सबै घटनाक्रमलाई मज्जाले नियाल्ने हो भने पार्टी फुटाउन चाहिने आफुसंग भएको २० प्रतिशत जोगाउन पनि सारै मुश्किल देखिन्छ ।
माधव नेपाल आफ्नै समहू भित्रै कमजोर बन्दै गएका छन् । यस अघि उनलाई साथ दिएका नेताहरु एमालेमै रहने पक्कापक्की भएको छ भने उनीहरुले भने जस्तै माग ओलीले पुरा गरिसक्दा पनि पार्टी विभाजनमा जाँदा थप अप्ठेरो पर्ने देखीएको छ । पदकै लागी र सत्ताकै लागी पार्टी फुटाएको अपजसको भारी माधव नेपालको टाउकामा पर्ने देखिएको छ । अनलाइन मार्गबाट
Previous नियमित से’क्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? देखिन्छ शरीरमा यस्तो लक्षण
Next Tiktok मा लाइक views लाइक र भ्युजको लागि यी युवतीले जे गरिन